Budada Raw Boldenone (846-48-0) Soosaarayaasha & Bixiyeyaasha - Warshadaha
Kalluunka Boldenone waa caanaha ugu caansan ee isticmaalka caafimaadka xoolaha. Waxay leedahay heer aad u sarreeya hormoonka haweenka waxayna si firfircoon wax uga qabataa sameynta. Boldenone waa mid taabogal ah oo xasilan si loo dhiirrigeliyo muruqyada iyo koritaanka xoogga. Haddii la qaato daawooyinka kale, saameynteeda daawada waxay noqon doontaa mid ka fiican.
Video Root Boldenone (846-48-0) video
Qalabka Root Boldenone (846-48-0) Sharaxaad
Kalluunka Boldenone, waa macmacaan anabolic-androgenic steroid (AAS) iyo 1 (2) -hidhadrojeered analogue of testosterone. sida daroogada daawada, waxaa loo isticmaalaa sida budada Boldenone aan la soo saarin, aaladda aan qarsoodi ahayn. Waxqabadka boldenone badanaa waa anabolic, oo leh awood awoodeed oo hooseeya. Kalluunka Boldenone wuxuu kordhin doonaa xajinta nitrogen, synthesis protein, wuxuu kordhiyaa rabitaanka cunnooyinka iyo kicinta xayiraadda erythropoietin kelyaha. Kalluunka Boldenone waxaa loo soo bandhigay isku day lagu doonayo in lagu abuuro methandrostenolone (Dianabol) oo muddo dheer soconaya, oo loogu talagalay xanuunada tamarta.
Root Boldenone budada ah (846-48-0) Smamnuucista
Product Name Root Boldenone budada
Magaca Kiimikada Boldenone; Dehydrotestestoneone; 846-48-0; 1,2-Dehydrototestosterone
brand NAme Boldebal H, Equipoise, iyo Sybolin
Molecular Wsideed 286.415 g / mol
barafku Psaliid 164-166 ℃
karisaaning Psaliid 435.6 ° C at 760 mmHg
Application Budada Boldenone waxaa si firfircoon loogu qoondeeyey sida steroid anabolic anrolic. Waxaa loo isticmaalaa in lagu kordhiyo koritaanka muruqa iyo raashinka xoolaha iyo bini-aadanka
Waa maxay budada Root Boldenone (846-48-0)?
Boldenone waa 3-oxo-Delta (1), Delta (4) -kaanka oo lagu bedelay koox oxo ah 3 iyo koox beta-hydroxy ah oo ku jirta 17. Waa steroid anabolic androgenic kaas oo loo sameeyay isticmaalka caafimaadka xoolaha. Waa 17beta-hydroxy steroid, steroid anabolic and a 3-oxo-Delta (1), Delta (4).
Boldnlone waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee loo isticmaalo steroid steroid, loo isticmaalo daawada xoolaha. Qiyaasta hormoonka hormoonka waa mid aad u sarreeya, saameynta synthetic sidoo kale waa mid aad u xoogan. Beela Dan Ketone wuxuu noqon karaa muruq iyo koboc dhaqaale oo joogto ah oo xoog leh, ka fiican haddii Daawooyinka kale, ayaa ah kuwa ugu caansan ee loo isticmaalo xayawaanka ugu habboon ee lagu ilaaliyo muruqa ka dib "wareega" mid ka mid ah steroid (iyo koox kale oo daroogo ah, iwm.). Intaa waxaa dheer, xaaladaha dabiiciga ah ee jirka bini'aadamka ayaa soo saari kara qiyaasta Boldenone.
Sidee budada Boldenone budada ah (846-48-0) shuqullada
Boldenone, waa steroid anabolic loogu talagalay isticmaalka xayawaanka, Boldenone ayaa kordhin doona xajinta nitrogen, dheellitirka borotiinka, kordhiya cunto yari iyo kicinta xayiraadda erythropoietin ee kelyaha. Boldenone ayaa la isku daray iskuday la isku dayey in uu abuuro methandienone mudo dheer (dianabol), dhab ahaantii boldenone waxbaa sameeya sida methandrostenolone. Waxay leedahay nolol aad u dheer, oo waxay ku muujin kartaa tijaabada steroid ilaa sannadka 1.5, sababtoo ah qiyaasta dhererka aan qarsooneyn ee ku xiran steroid waalidka. Raadinta qadarka daawada si sahlan ayaa loo ogaan karaa bilaha kadib marka la joojiyo isticmaalka.
Dufanka Root Boldenone (846-48-0)
Wax ka yar 400-600mg toddobaadkii, ha kordhinin qiyaasta kor ku xusan 600mg, sababtoo ah ma lahaan wax faa'iido dheeraad ah. Dhererka caadiga ah ee wareegga waa 10-12weeks.
Dufanka Bootenone Root (846-48-0) Faa'iidooyinka
Bustenone budada ayaa kordhin kara xajinta nitrogen, kobcinta borotiinka, waxay kordhisaa rabitaanka cuntada iyo kicinta xayiraadda erythropoietin ee kelyaha. Jimicsiga iyo cayaartoyda tiro badan oo isboorti ayaa isticmaalay Boldenone si ay u dhisaan murqaha waxayna xoojiyaan waxqabadka. Inkastoo steroids anabolic androgenic ay kordhin karto muruqyada cufan, xoog iyo awoodda ay u leeyihiin inay ku tababaraan waqti dheer iyo ka sii adag.
Iibso budada Boldenone (846-48-0) laga bilaabo Buyaas.com